20-qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Maanta Hotel Jaziira ee Magaalada Muqdisho – Radio Daljir
Luulyo 26, 2015 8:43 b 0
Axad, Luuliyo 26, 2015 (Daljir)—Inta la xaqiijiyey 20-qof ayaa ku dhibatay tiro intaas ka badana dhaawacyo ayaa kasoo gaaray qarax Maanta lala beegsaday Hotelka Jaziira ee magaalada Muqdisho, wararku waxaa ay sheegayaan in qaraxa loo adeegsaday Gaari wayn oo waxyaabaha qarxa lagasoo buuxiyey kaasi oo lagu qarxiyey afaafka hore ee Hotelka oo ku yaalla waddada aadah Garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aadan Cadde.
Qof goob-jooge ah ayaa warbaahinta u sheegay in dad badan oo isugu jira dadkii Hotelka deganada iyo dad shacab ah oo ka ag-dhawaa ayku dhinteen qaraxa, kuwaasi oo wali maydadkoodu yaalliin goobihii ayku dhinteen ee qaraxu ku haleelay.
Dhismaha Hotelka ayaa bur-bur xooggani soo gaaray, iyadoo qaraxani noqonayo kii ugu horayey ee loo adeegsado gaadiidka xuulka qaada ee ka dhaca magaalada Muqdisho.
Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa xiray guud ahaan waddooyinka soo gala goobta qaraxu ka dhacay, iyadoo dadka iyo Gaadiidka loo diiday maritaanka waddada isku xirta Garoonka Aadan Cadde iyo KM-4.
Ciidammo fara badan oo isugu jira kuwa dowladda ayaa xiray waddada Garoonka Aadan Cadde iyo Is-goyska KM-4 isku xira, iyadoo Dadka iyo Gaadiidka loo diiday inay maraan Waddada Aadda Garoonka Diyaaradaha Muqdisho; iyadoo xaaladdu ay aad u kacsan tahay xilligan.
Hotel Jaziira ayaa waxaa deggenaa xubno ka tirsan Dowladda Somalia, Safaaradaha laba waddan oo kala ah Imaaraadka Carabta iyo Qatar, waxaa kaloo deggenaa Dublamaasiyiin caalami ah iyo weliba dad kala duwan oo Soomaali iyo Ajnabi ah.
Weerarkan Qaraxa loo adeegsaday ayaa kusoo beegmaya xili ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ururka Al-Shabaab kala wareegeen deegaano ka tirsan gobollada Bay iyo Gedo.